Xisaabiyaha Guud ee Dowladda Puntland oo Maanta Xilka kula wareegay Bosaaso – Radio Daljir
Xisaabiyaha Guud ee Dowladda Puntland oo Maanta Xilka kula wareegay Bosaaso
Agoosto 13, 2015 8:34 b 0
Khamiis, Ogoosto 13, 2015 (Daljir) — Magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari waxaa maanta ka dhacday Munaasabad ay xilalka kula kala wareegayeen Xisaabiyahii guud ee hore ee Dowladda Puntland iyo Xisaabiyaha cusub ee dhowaan loo magacaabay.
Munaasabadda oo ka dhacday xarunta Wasaradda Maaliyadda Puntland ee Boosaaso ayaa waaxaa ka qeyb galay wasiirka wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland iyo xubno kale oo ka tirsan wasaaradda iyo saraakiil kale.
Axmed maxamed xasan oo ah xisaabiyihi hore ayaa ka hadlay goobta isagoo sheegay in uu ku faraxsan yahay xil wareejintan islamarkaana uu si hufan ugu wareejinayo xilka sarkaalka loo soo magacaabay .
Xisaabiyaha cusub Cabdirisaaq siciid nuur ayaa dhankiisa amaanay wax qabadka xisaabiyihii hore ee xilka ku wareejiyay waxaana uu ka codsaday in uu ay la shaqeeyaan shaqaalaha Wasaaradda iyo xisaabiyihii horeba.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland C/laahi Sheekh Axmed oo isna goobta hadal ka jeediyay ayaa soo dhaweeyay xisaabiyaha cusub isagoo sheegay in ay u taalo shaqo adag loona baahan yahay in uu ugaga soo boxo sidii loogu talagalay.
Dhinaca kale wasiirka Maaliyadda Puntland ayaa maanta ka sameeyay boqoashooyin magaaladan Boosaaso isagoo tagay goobo muhiim ah oo ay ka mid tahay xarunta Rugta ganacsiga ee Boosaaso.
The Campaign World Humanitarian Day 2015